News Collection: मलाई यौन इच्छा हुँदा मेरो श्रीमान्लाई हुँदैन र उहाँलाई इच्छा हुँदा मलाई हुँदैन। यस्तो के कारणले भएको होला ?
मलाई यौन इच्छा हुँदा मेरो श्रीमान्लाई हुँदैन र उहाँलाई इच्छा हुँदा मलाई हुँदैन। यस्तो के कारणले भएको होला ?
म ३० वर्षिया विवाहित महिला हुँ। मलाई यौन इच्छा हुँदा मेरो श्रीमान्लाई हुँदैन र उहाँलाई इच्छा हुँदा मलाई हुँदैन। यस्तो के कारणले भएको होला ? यद्यपि हामी एक-अर्कासँग खुसी छौं।
यौन हाम्रो जीवनको अभिन्न भाग हो। हामी आफ्नो यौनचाहनालाई स्वाभाविक रूपमै पूरा गर्ने प्रयास गर्छाैं, यो अधिकारको कुरा पनि हो। प्रत्येक समाजले यसलाई महत्त्व दिँदै त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। विवाह गर्ने परम्परा समाजमा महत्वका साथ स्थापित हुनुका पछाडि यो एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हुनुपर्छ। यौनचाहना शान्त पार्न हामी प्राकृतिक रूपमै उपायहरू खोज्न थाल्छौं।
दुवैमा एकैपटक यौनेच्छा नहुने कारण ?
मेरो विचारमा दुवैलाई यौनच्छा निरन्तर रूपमै हुन्छ। यो स्वाभाविक हो कि र कसैमा कम हुन्छ भने कसैमा बढी। यो व्यक्तिअनुसार फरक पर्छ नै। फेरि त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने आवश्यकतामा पनि ढिलो वा चाँडो हुनसक्छ। यौनेच्छा पूरा गर्न चाहे पनि त्यसका लागि चाहिने क्रियाकलापमा अग्रसरतामा देखाउनु फरक कुरा हो। त्यो दुवै व्यक्तिका लागि एउटै समयमा आउनुपर्छ भन्ने केही छैन।
विवाहको केही समयपछि सामान्यत: धेरैजसो व्यक्तिले हप्तामा २ पटक यौनसम्पर्क राख्छन्। यदि जोडीबीचको यौनसम्पर्क नै मुख्य यौनेच्छा पूरा गर्ने तरिका हो भने दुवै जनाले त्यसको हाराहारीमा अग्रसरता देखाउन सक्छन्। यसो गर्दा तालमेल केही हदसम्म भए पनि मिल्न जान्छ।
कतिपय शारीरिक तथा मानसिक कारणले पनि यौनेच्छा नै कम हुने वा भए पनि त्यसमा अग्रसरता देखाउन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको हुनसक्छ। शारीरिक धपेडी वा मानसिक दबाब दुई जनामध्ये कुनै एकमा मात्र भएको र अर्को व्यक्तिले त्यसलाई थाहा नपाएको वा बुझ्न नसकेको स्थितिमा एक जनाले यौनसम्पर्कका लागि अग्रसरता देखाउँदा अर्को व्यक्ति तयार नभएको स्थिति आउन सक्छ।
के यौन प्रतिक्रिया चक्रमा केही कुरा फरक हुन्छ ?
आधारभूत रूपमा महिला तथा पुरुषमा यौन प्रतिक्रिया चक्र उस्तै हुन्छ, तर पनि केही कुरामा भने फरक देख्न सकिन्छ। यदी चरमसुखको चरण पछि पनि यौन कतimगबतष्यल -स्टिमुलेशन) निरन्तर रूपमा भैरह्यो भने कतिपय महिलाले एकपल्टभन्दा बढी चरमसुख (mगतिष्उभि यचनबsm० पाउन सक्छन्। पुरुषहरूमा भने त्यस्तो हुँदैन। महिला तथा पुरुषबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फरक च्भाचबअतयचथ एभचष्यम -रिफ्राक्टरी पिरियड) हो। पुरुषहरू चरमसुख पाएर पुरानै अवस्था फर्किएपछि केही समयका लागि यौन रूपमा उत्तेजित हुन सक्दैनन्।
विचार गर्नुपर्ने कुरा अर्को पनि छ। समाजमा विद्यमान महिला यौनप्रतिको संकुचित सामाजिक मूल्य-मान्यताका कारण कतिपय महिलाले दाम्पत्य जीवनभित्रै पनि यौनसम्बन्धी कुरामा खुला मनले सहभागिता देखाउन नसक्ने स्थिति हुनसक्छ। यस्तो स्थितिमा महिला सुरुका दुई चरण लामो समय लिन सक्छन् भने पुरुषको जति सहज र चाँडो चरमसुखको स्थितिमा नपुग्न सक्छन्। यस्तो कुरामा ध्यान नदिँदा आफ्नो यौन साथी, श्रीमतीको यौनचाहना एवं आवश्यकताका सम्बन्धमा समझदारी पूर्ण तालमेलको अभाव हुन्छ र महिलाले यौन सन्तुष्टिबिना नै चाहना दबाएर बस्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिन यौन क्रियाकलापमा पुरुष मात्र नभई महिला पनि उत्तिकै सक्रिय हुनु जरुरी छ।
के गरे तालमेल मिलाउन सकिन्छ ?
यौन उत्तेजना मानसिक तथा शारीरिक दुवै कुराको जटिल प्रक्रिया हो भन्ने कुरा त हामीले बुझेकै छौं। यौन सुख खुरुक्क सामान वा वस्तु दिएजस्तो अरूले दिन सक्ने वा आफूले पाउन सक्ने कुरा होइन। यौन क्रियामा संलग्न नहुने वा सहयोग नै नगर्ने भए तपाइंर् ले आफ्नो यौन साथीलाई दोष दिन सक्नुहोला। कुनै पनि व्यक्तिकोे यौन सुख प्राप्तिका लागि अरूको सहयोग रहे पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हात त उसको आफ्नै हुन्छ। अनावश्यक कुरामा चाहिँदो भन्दा बढी चासो चिन्ता लिनुको सट्टा यौन आनन्दलाई बढाउने उपायतिर ध्यान दिए वैवाहिक जीवनमा चाहेजति यौन सम्पर्क गरी आनन्द उठाउन सकिन्छ।
श्रीमान्सँगको सम्बन्धका बारेमा तपाईंले खासै लेख्नुभएको छैन, सम्बन्धको सुमधुरताको सन्दर्भमा होस् वा कटुतामा वा यसमा आएका परिवर्तनका बारेमा त्यसबाहेक दैनिक जीवनमा आईपर्ने तनावहरू जस्तै चिन्ता, निराशा, थकाई, अन्तरव्यक्ति सम्बन्धको चिसोपन तथा दम्पतीबीचको तनाव आदि यसका कारण हुन सक्छन् भने त्यसलाई पनि राम्रोसँग केलाएर समाधान तिर लाग्नुपर्ने हुन्छ।
कतिपय दम्पतीले यौनसम्पर्कको सुरुवात नै एकैपल्ट योनिमा लिङ्ग प्रवेशका साथ गर्छन्। यसो गर्नाले पुरुष तथा महिला यौन प्रतिक्रिया चक्रको विभिन्न चरणमा फरक-फरक समयमा पुग्ने हुँदा दुवैले एकै समयमा चरम यौन आनन्द पाउन गाह्रो हुन सक्छ। पाक्क्रीडाले महिला वा पुरुषलाई राम्रोसँग उत्तेजित गराउन र यौनसुख प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ। सामान्यत: योनिमा लिङ्ग प्रवेश सुरु गर्नुभन्दा पहिले यौन उत्तेजना दिलाउन वा लिन गरिने विभिन्न किसिमको यौन क्रियाकलापलाई नै प्राक्क्रीडा भनिन्छ। अंग्रे जीमा यसलाई ायचभउबिथ भनिन्छ। यस किसिमको प्राक्क क्रीडाले यौन आनन्दलाई चरम बिन्दुमा पुर्‍याउन सहयोग गनर्ेे मात्र नभै एक-आपसमा राम्रो सञ्चार गर्न मदत गरी आपसी समझदारी बढाउँछ।
अन्तमा, दुवैले एकसाथ चरमसुख प्राप्त गर्न निकै अभ्यास चाहिन्छ। त्यसैले समाधानका लागि राम्रो कुरा त के हुन्छ भने कुनै रातको यौनसम्पर्क श्रीमान्को यौन सुखका लागि समर्पित गर्ने र अर्को रात श्रीमतीका लागि। आफूलाई यौनेच्छा केही कम भए पनि केही हदमा आफ्नो यौन जोडीलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। बिस्तारै तालमेल बढ्दै जाँदा यस्तो समस्या नै गौण बनेर जान्छन्।